ज्वरो र रुघाखोकीको बिरामी अस्पताल पुग्दा डाक्टर भागाभाग ! – Hamrosandesh.com
ज्वरो र रुघाखोकीको बिरामी अस्पताल पुग्दा डाक्टर भागाभाग !
विराटनगर,३ चैत ।
संसद् बैठकबाट आइतबार हिँडेका सांसद पूर्णप्रसाद राजवंशीलाई झापामा अचानक ज्वरो आयो। सय डिग्री माथि ज्वरो आएपछि उनी झापाकै एक नाम चलेको अस्पतालमा चेक गर्न पुगे।
तर, उनलाई ज्वरो आएको सुन्नासाथ चिकित्सकले कोरोनाको संक्रमण हुने भन्दै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जान भने। नजिकैको अर्को अस्पताल पुगेर पुन: चेक गरेका सांसद राजवंशीलाई अन्य कारण ज्वरो आएको पत्ता लाग्यो र उनी औषधि सेवनपछि घर फर्किए।
कोरोना संक्रमणको आशंकामा शनिबार कोशी अस्पतालले धरान रेफर गरेका बिरामीलाई पनि बिपीका चिकित्सकले चेक गर्न आनाकानी गरे। घरमै ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नु र आइतबार परीक्षणका लागि आउनु भन्दै बिरामीलाई घर पठाए। आइतबार बिरामीले अस्पताल पुगेर थ्रोट स्लाब ल्याब टेस्टका लागि दिएका छन्। उनीहरूको चेकजाँचमा को खटिने भन्ने कुरामा चिकित्सकमा हानाथाप शनिबार र आइतबार पनि चल्यो।
ज्वरो आएर उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल हस्पिटल पुगेका भद्रपुर झापा निवासी एक पुरुषलाई प्रारम्भिक जाँचपछि नै चिकित्सकले कोरोनाको आशंकामा ग्रान्डी हस्पिटल काठमाडौं पठाए। उनमा कोरोनाको आशंका भन्नासाथ झापा र मोरङमा आइतबार दिनभर कोरोनाकै चर्चा चल्यो।
‘शनिबार अस्पताल पुगेकी थिएँ, कोशी अस्पतालले रेफर गरेको बिरामी अस्पताल पुग्दासमेत डाक्टर को जाने भन्दै हानथाप गर्दै बसेका थिए’, उनले भनिन्, ‘फिजिसियन डाक्टरले चेक गर्नुपर्नेमा पछि अर्कै डाक्टर गएर चेक गरेको थाहा पाएँ।’ अहिले अस्पतालमा ज्वरो आयो वा रुघा लाग्यो भनेर उपचार गर्न जाँदा उपचार नै नपाउने अवस्था प्रदेश १ मा सुरु भएको अर्का सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताए।